fa dia slot ny fahatsiarovana
bon de fampihenana 10 euros geant casino
Septambra 2017 – Malta, Ny iGaming Sampy mpikarakara dia nanambara fa ny mari-pankasitrahana fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny mpiara-miasa Malta ka hanao efa nanamafy ny 50 famaranana izay efa nofinidiny mba hiditra ny penultimate manodidina, izay ny mpitsara dia manapa-kevitra eo amin'ny farany 16 sampy izay dia hosatrohina satroboninahitra amin'ny Grand Tompony Suite, Hilton Malta tamin'ny 26 septambra nandritra ny taona 2017 iGaming Sampy gala sakafo hariva. Ny iray zato sy dimam-polo fohy voatanisa kandidà hametraka ny fitsapana noho ny dimam-polo manam-pahaizana momba ny mpitsara nandritra ny telo andro feno ny tafatafa fotoam-pivoriana.
Ny mpitsara laharana kandidà tsirairay tamin'ny isa karatra izay Malta ka hanao, koa ny mpanatrika nandritra ny tafa sy dinika, nanana andraikitra ny famerenana ny ratings, ny fanisàna ireo maro sy manamafy ny famaranana ny 16 sokajy fa dia slot agp. Ny fitsarana ny dingana efa lehibe fahombiazana lafin-javatra ho an'ny iGaming Sampy, amin ' izany dia ny voalohany ny Orinasa nahazo ny loka zava-nitranga izay nitarika ny tafatafa ny dingana, raha izany no audited amin'ny sehatra Iraisam-pirenena fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny mafy. Raha niresaka momba ny dingana, Michael Pedersen, TALE jeneralin'ny iGaming Sampy ny voalaza, "Ny fitsarana ny dingana-dehibe ny fanapahan-kevitra dia nanao izany mba ho azo antoka fa ny mari-pankasitrahana dia azo itokisana." "Efa niteraka fitiavan-javatra lehibe maha-zava-dehibe eo amin'ny lafin-javatra io ary mino izany no làlan-tokana ho an'ny orinasa mifandray amin'ny mari-pankasitrahana." iGaming Sampy dia ao amin'ny andiany faharoa ary tamin'ity taona ity dia nandray telo ny fanendrena avy amin'ny fanontana voalohany sy ny mpikarakara dia manantena ny avo roa heny ny mpanatrika ny iGaming Sampy Gala Sakafo ny zava-nitranga fa dia slot ny fahatsiarovana.
Ramona Mifsud, talen'ny iGaming Sampy niteny hoe "tamin'ity taona Ity isika no nahita lehibe ny tombontsoa avy amin'ny Orinasa avy amin'ny mpanohana sy ny orinasa nanatrika ny gala sakafo hariva." "Matoky isika fa amin'ity taona ity isika, dia tsy maintsy misy fepetra fahombiazana indray fa izahay ihany koa hahatratra ny tanjona ny fampiakarana €10, 000 ny Malta ny Fiaraha-monina Tratra Tahirim-bola." Ny famaranana ny faha-categories dia: izay Rehetra tafakatra amin'ny dingana farany efa nanasa ny hetsika natao tamin'ny 26 septambra aiza izy dia hianatra ny vokatra raha izy no handray an-trano ny fankasitrahana izay ny iGaming Sampy, ao anatin'ny sokajy ity fa dia slot amr cnr. Ny hetsika, izay dia napetraka ho ny mahavariana alina ny fialam-boly hisokatra amin'ny Hon.
Silvio Schembri, Parlemantera Mpitan-tsoratra ho an'ny Tolotra ara-Bola, ara-Nomerika toe-Karena, sy ny zava-Baovao, ary dia ho nampiantrano Michael Caselli, Orinasa iray Mpandraharaha sy ny Mpiaro ny iGaming Sampy sy i Becky Liggero, CalvinAyre ihany Orinasa mpanao gazety sy ny Masoivoho ny Bodog.com bon de fampihenana 10 euros geant casino. Tongasoa fandraisana ho fanombohana ny hariva izay ho alina feno tsy ampoizina, glamour, mampientam-po ny fialam-boly, ny volafotsy fanompoana ny sakafo hariva, free tondra-divay sy liquors nanaraka ny antoko rehefa ho nampiantrano amin'ny Roa-polo Roa hita ao amin'ny Portomaso Raharaham-barotra Tilikambo. Ny ampahany amin ' ny vola miditra avy isaky ny tapakila namidy nandritra ny hetsika ho fanomezana ny Malta ny Fiaraha-monina Tratra Tahirim-bola raha ny mpikarakara ihany koa ny mpandrindra hafa ny asa fanangonam-bola miaraka amin'ny tanjona hanangana €10, 000 ny Malta ny Fiaraha-monina Tratra Tahirim-bola.
Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny famandrihana ny latabatra fifandraisana Ramona Mifsud amin'ny 99477102 na handefa mailaka any amin'ny [email protected] Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre.